Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Barbados » Sidina KLM vaovao avy any Amsterdam mankany Barbados
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Sidina KLM vaovao avy any Amsterdam mankany Barbados.
KLM Royal Dutch Airlines no kaompaniam-piaramanidina voalohany tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Seawell any Barbados tamin'ny 19 Oktobra 1938.
Ny sidina KLM Royal Dutch Airlines voalohany, voalahatra ny 16 Oktobra 2021 dia efa lany.
Ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fitaterana iraisam-pirenena, ny senatera Hon. Lisa Cummins dia namaritra ny serivisy KLM vaovao ho fanentanana lehibe ho an'ny fizahan-tany any Barbados.
Ny serivisy KLM vaovao dia hanome fidirana bebe kokoa sy fifandraisana tsy misy tohiny mankany sy avy amin'ny firenena sy faritra eropeana lehibe toa an'i Netherlands, Belzika, France ary Scandinavia, via Amsterdam Airport Schiphol any The Netherlands.
Varavarana eoropeana vaovao iray dia efa nampanantena ho an'i Barbados rehefa miomana handray serivisy mivantana mivantana avy any amin'ny seranam-piaramanidina Amsterdam Schiphol (AMS) amin'ny alàlan'ny KLM Royal Dutch Airlines ny seranam-piaramanidina Grantley Adams International (BGI).
Volana maro taorian'ny nanambarana ny serivisy vaovao, dia efa lafo ny sidina voalohany, natao tamin'ny 16 Oktobra 2021. Ankoatry ny valiny miavaka, dia fotoana manan-tantara ho an'ny firenena izany KLM Royal Dutch Airliness no zotram-piaramanidina voalohany tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Seawell tao Barbados tamin'ny 19 Oktobra 1938. Ankehitriny, 83 taona aty aoriana, dia manao tantara indray miaraka amin'ny sidina efa namidy avy tany Amsterdam nankany Barbados.
Ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fitaterana iraisam-pirenena, ny senatera Hon. Nofaritan'i Lisa Cummins ho fampiroboroboana lehibe ny fizahantany ao amin'ny firenena. “Manantena ny handray an'i KLM indray izahay, roapolo taona aty aoriana, any amorontsiraka. Rehefa mijery ny toetry ny indostrian'ny fizahantany manerantany isika, ny zava-misy fa ao anatin'ity areti-mandringana ity dia manohy maneho fahatokisan-tena toy izany amin'ny mpiara-miasa amintsika Barbados marika, miaraka amin'ny KLM mampiakatra seza 20,000 XNUMX eo ho eo avy any Eropa mankany Barbados mandritra ny dimy volana, dia mampihetsi-po. Ny tena zava-dehibe dia taratry ny asa nataon'ny ekipa fizahan-tany manompo an'i Barbados ity rehefa manamarika ny fanidiana ny fifampiraharahana bebe kokoa ho an'ny fiaramanidina vaovao sy mivelatra isika ary manohy mamelona ny sehatra misy antsika amin'ity toe-javatra miavaka ity. ”
"Ka tiako ny hidera ny ezaky ny ekipa iray manontolo, indrindra ireo ekipanay ao an-trano eto amin'ny Minisiteran'ny, GAIA, ary ny tsenanay ampitan-dranomasina amin'ity tranga ity, indrindra ny ekipa eropeana, izay niasa tsy nisy hatahorana mba hahatanteraka izany," hoy izy.
Amin'ny maha iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana maharitra indrindra eto an-tany, miasa amin'ny anarany voalohany nandritra ny 100 taona, KLM no mpitatitra lavitra lavitra indrindra avy any Eropa, izay mitondra toerana 318 any amin'ny firenena 118 miaraka amina mpiara-miombon'antoka mizara 80. Ny serivisy KLM vaovao dia hanome fidirana bebe kokoa sy fifandraisana tsy misy tohiny mankany sy avy amin'ny firenena sy faritra eropeana lehibe toa an'i Netherlands, Belzika, France ary Scandinavia, amin'ny alàlan'ny Amsterdam Airport Schiphol any The Netherlands.
Cummins nanampy hoe: "Ity fivoarana ity dia hanatsara ny ezak'i Barbados hanangana indray ny dian-tongony any Eropa ary tena faly aho fa afaka mirehareha fiaraha-miasa matanjaka miaraka amin'i KLM sy Lufthansa, mpivarotra eropeana roa i Barbados, rehefa manakaiky ny ririnina 2021/2022 isika. Izahay dia manolo-tena hitazona io tolotra io handalo ny fotoana sisa tavela.
"Mazava ho azy, manantena ihany koa izahay fa maro ny olom-pirenena barbariana sy Karaiba no maniry ny hanararaotra ireo fifandraisana mahomby any Eropa ireo avy any Barbados ary manantena izahay fa miaraka amin'ny fangatahana mafy dia handinika ny fanitarana ny vanim-potoana," hoy izy. Ny zavatra iarahanay miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay ihany koa dia ny fandanjalanjana ny tanjon'ny fizahan-tany ho an'ny mpandeha miaraka amin'ny fandaharam-potoananay mba hanomezana ny fandefasana entana ho an'ny entana indrindra ireo entana mora simba. Zava-dehibe izany satria ao anatin'ny portfolio -n'ny fitaterana iraisampirenena sy lakilen'ny fampivelarana ara-toekarena antsika any amin'ny tsena vaovao mampiasa fifandraisan'ny fiaramanidina.
Ny sidina dia hiasa tsy miato avy any Amsterdam mankany Barbados, telo andro isan-kerinandro Alatsinainy, Alakamisy ary Sabotsy amin'ny fiaramanidina KLM maoderina sy mahomby amin'ny Airbus A330-200 miaraka amin'ny seza 264 amin'ny kilasy telo ao anatin'izany ny orinasa. Miala ao Amsterdam amin'ny 12:25 hariva CET ary tonga ao amin'ny BGI 4:45 pm AST, dia hiasa hatramin'ny 31 martsa ny serivisyst, 2022.